July 25, 2019 - Book News Madagascar
Polisim-pirenena – Polisy 1098 hanome rà
Polisy vaovao miisa 1098 no hanome rà maimaimpoana teny amin’ny HJRA Ampefiloha. Polisy nanome rà Nanome rà maimaimpoana ho an’ny vahoaka Malagasy ireo Polisy vaovao tao amin’ny andiany “Fenitra” teny amin’ny HJRA Ampefiloha ny talata lasa teo. Miisa 400 ireo Polisy vaovao tonga nanome rà tamin’izany. Mbola ho avy hanome Read more…
Mpamonjy voina 1/1700 ihany no misy eto amintsika raha tokony ho 1/800. Tsy ampy “Mbola tsy ampy ny isan’ny mpamonjy voina eto Madagasikara amin’izao”, araka ny nambaran’ny lieutenant Ralimbison, tomponandraikitry ny Seraseran’ny mpamonjy voina, nandritra ny lanonana fanamarihana ny faha fitopolo taona nisian’ny mpamonjy voina. Mpamonjy voina 1/1700 ihany no Read more…